mairie-antananarivo – Fanoloran’ny FMF ny CUA ny bozak’i Mahamasina
Fanoloran’ny FMF ny CUA ny bozak’i Mahamasina
auteur 15 febroary 2017
Natolotry ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra, ny Kaominina Antananarivo Renivohitra na ny CUA omaly, ny fahavitan’ny fambolena sy fanarenana ary ny fanamboarana ny bozaka amin’ny kianjaben’i Mahamasina. Ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra no niantoka ny fanamboarana izany niaraka tamin’ireo mpiara-miombon’antoka aminy ka vola mitentina hatramin’ny 45 000 Euros no nanarenana sy nanamboarana ho tonga lafatra sy tena manara-penitra ity bozaky ny kianjaben’i Mahamasina ity.
Ny CUA kosa no hitantana ny kianja sy hisahana ny fikokajojana izany bozaka vao vita izany. Nanolotra ny asa ny avy amin’ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra nahitana ny filoha lefitra Doda Andriamiasasoa sy ny sekretera jeneraly Stanislas Rakotomalala, nandray izany kosa, nisolotena ny ben’ny tanànan’Antananarivo, Lalao Ravalomanana, ny lefitra faharoan’ny ben’ny tanàna, Julien Andriamorasata.
Ho fikojana ny kianja bozaka tsy ho simba, sy ho fitantanana araka ny tokony ho izy azy, hisy ny fifanarahana hiarahan’ny fiadidiana ny tanàna sy ny Federasiona hatao. Samy fanirian’ny andaniny sy ny ankilany ny tsy hampiasana be loatra intsony an’i Mahamasina fa ny hanamboarana ihany koa ny kianjan’Alarobia ho hampiasaina, nilaza ny CUA fa efa an-dalam-panamboarana ny kianjan’Alarobia ankehitriny. Ankoatra izany, tsy tokony hitsahina intsony koa ny bozaky ny kianja isaky ny fetin’ny 26 jona, fa tokony hatao eny Antsonjombe avokoa ny lanonana ara-kolontsaina mandritra ny fetim-pirenena.
Fanomezana sakafo ho an’ireo tra- boina teny Ambodivoanjo
Tafa tamin’ny mpanao gazety nataon’i DUD- CUA momba ny trano eo Ambohijatovo sy ny tany eny Andohatapenaka
Ambohijatovo : Fandrodanana trano
Fankalazana ny andro iraisam-pirenena miaraka amin’ny « Nation Unies » fikambanana Lion’s
Vaovao farany	Fanomezana sakafo ho an’ireo tra- boina teny Ambodivoanjo
Les procédures de perception de la TAXE DE SEJOUR